ọhụụ | Otu Di na Nwunye
June 30, 2019 + Europe, Nri na ihe ọṅụṅụ, Italian, Italy, Isi akwukwo, Ezi ntụziaka
Gnocchi omenala bụ ihe dị mfe na-atọ ụtọ Ịtali bụ nke a pụrụ ime otu nde ụzọ dị iche iche - ma obi nke efere bụ otu ihe ahụ. Gnocchi nwere ike ịkọwa ya dị ka ihe nduku Italian. A kwenyere okwu gnocchi na esi na Lombard okwu knohha, nke pụtara ụdị nko - dịka nke eriri. Ọ bụ ezie na ọ bụghị eke ... GỤKWUO
February 10, 2019 + Europe, Nri na ihe ọṅụṅụ, Italian, Italy, Isi akwukwo, Ezi ntụziaka
Esi mee Italian Pasta Rustica
Italian Pasta Rustica bụ kpochapụwo Italian efere na nke dị arọ na abụọ isi Efrata na anyị hụrụ - parmesano reggiano na garlic! Ọ bụ ezie na ị nwere ike iji okpukpu abụọ na-eme ihe n'usoro a, na ọtụtụ ndị ga - enwe mmasị dị iche iche mgbe ị na - eji regmsiano eme ihe. Ọ bụrụ na i nwere ike ime nke ahụ, iji reggiano ga-emepụta ọtụtụ ederede velvety na ihe omimi ekpokọtara miri emi .... GỤKWUO
June 8, 2018 + inspirational, Self Improvement
Iwu Na-akpali Anyị na Ịmepụta Njem Ndụ
"Gịnị ka ị chọrọ n'ezie ime?" Ajụjụ ahụ na-abụkarị n'ụbọchị ole na ole ndị mbụ ahụ mụ na Tracy malitere ịlụ, na-enweghị ihe ọ bụla iji mee ka aha anyị ghara ịdị na ya. N'oge ahụ, anyị enweghị echiche nke ịmepụta eziokwu nke anyị, ma ọ bụ nke na-agba ụwa gburugburu na ụfọdụ agbatị, euphoric jaunt, mana ọ bụ kama ihe nkasi obi ... GỤKWUO